MMTV95: May 2016
ဒီနှစ်ထဲမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဒီတရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အခု အချိန်ထိ ဂိမ်းလောကမှာ PC ဂိမ်းလောကမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ သုံးနိုင်ငံဂိမ်းကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ ... အဓိက ဇာတ်ကောင်ကတော့ ဂိမ်းတွေထဲမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ လှံတံရှည်ကိုင်တဲ့ သူရဲကောင်း Zhao Yun ကို အဓိက ပုံဖော်ထားပါတယ် ... တခြားနာမည်ကြီး ဇာတ်ကောင်တွေ ဖြစ်တဲ့ Lu Bu, Dong Zhuo, Chao Chao, Guan Yu, Diao Chan အစရှိတဲ့ သုံးနိုင်ငံဂိမ်းထဲက ဇာတ်ကောင် အကုန်နီးပါးကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ...
IMDb မှာ 7.5 ရရှိထားပြီး MyAsianTV မှာ 7.8 ရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ ... ကြည့်ကြည့်ကြပါဦးလို့
Episode 48 Episode 49
Episode 56 Episode 57
Posted by mmtv95 at 2:48:00 PM 81 comments:
Labels: 2016, Action, China, Drama, History, Series
၁၀ နှစ် ရည်းစားသက်တမ်း ရှိတဲ့ ဆူးဟွန်းတို့ စုံတွဲဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွေးအေးလာခဲ့ကြပါတယ် ... တစ်ရက် ဆူးဟွန်ဟာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဘူဆန်မြို့ကို အသွား ရထားပေါ်မှာ ခုံဘေးချင်းကပ်ထိုင်တဲ့ ဂျေယွမ်းနဲ့ ဆုံတွေ့တဲ့ အခါမှာတော့ ... ဆက်ကြည့်ကြည့်ပါဦး ...
MyAsianTV မှာ 9.1 ရထားပြီး IMDb မှာ 6.9 ရထားတဲ့ ကိုရီးယား အချစ်ဇာတ်ကားလေးပါ ...
>>>Download and Watch Here (715Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 5:02:00 PM 1 comment:
Labels: 2015, Comedy, Korea, Romance
The Huntsman: Winter's War (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Snow White and the Huntsman ပြီးတော့ နောက်ထပ် ထပ်ထွက်လာတဲ့ The Huntsman: Winter's War ပါ ...
သောကတွေ ဒေါသတွေ ပြည့်နေတဲ့ Freya ဟာ မြောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်နန်းတော်တည်ထောင်ပြီး သူရဲ့ Huntsman တွေကို အင်အားကြီးမားတဲ့ စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ... ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဖမ်းဆီးပြီး ဘာသံယောဇဉ်မှ မရှိအောင် လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးတယ် ... သူဟာ တိုင်းပြည်ကို "Do Not Love!" ဘယ်သူ့ကိုမှ သံယောဇဉ် မရှိရဘူးဆိုတဲ့ အတ္တစိတ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ် ...
ဒါကို သူ့ရဲ့ Huntsman တွေဖြစ်တဲ့ Eric နဲ့ Sara က တစ်ဦးကို တစ်ဦး ချစ်ကြိုက်ပြီး သံယောဇဉ် ရှိသွားတာကို Freya သိသွားတဲ့အခါမှာတော့ ... ဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါဦးပေါ့နော် ...
IMDb မှာ 6.2 ရရှိထားပြီး Rottten Tomatoes မှာတော့ Rating အရမ်းနည်းပါတယ် 17% ပဲ ရရှိထားပါတယ် ... ဒါပေမယ့် Freya နဲ့ Ravenna တို့ ညီအမ နှစ်ယောက်ရဲ့ ၀တ်စုံ ဒီဇိုင်းကိုတော့ သေသေချာချာကြီး ပြုလုပ်ထားပါတယ် ...
Thor မင်းသား Chris Hemsworth က Eric အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး
Sara အဖြစ် Jessica Chastain
Freya (Queen of North) အဖြစ် Emily Blunt Official
Ravenna (Evil Queen) အဖြစ် Charlize Theron တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ် ...
>>>Download and Watch Here (1.1G)<<<
Posted by mmtv95 at 3:12:00 AM No comments:
Labels: 2016, Action, Adventure, Drama, Fantasy
You are the Apple of My Eye (2011) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ထိုင်ဝမ်ကျောင်းသား အချစ်ဇာတ်ကားလေးပါ ...
အထက်တန်းကျောင်းသား/သူ ဘ၀တုန်းက ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ ရဲ့ ခံစားမှု ...
အတန်းကြီးလာပြီး တက္ကသိုလ်တွေတက်ရတဲ့အခါ ဖြတ်သန်းရတဲ့ ခံစားမှု ...
ရည်မှန်းချက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ အိပ်မက်ကိုယ်စီ ယုံကြည်ရာကိုယ်စီနဲ့ လူငယ်တစ်စု ကြားက အချစ်ရေး ...
ကြီးကြီးမားမားကြီး လုပ်ပြသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို တည်ဆောက်သွားတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးပါ ... နည်းနည်းလေးတော့ အမြင်မတော်တာမျိုးလေးတွေ ပါပေမယ့်လည်း ကြည့်ကြည့်ကြပါဦးလို့ ...
ဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ပြီး အထက်ကျောင်းသား/သူ ဘ၀တွေကို တဖန်ပြန်လည် လွမ်းဆွတ်မိစေမှာပါ
IMDb မှာ 7.7 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ 84% တောင်ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ် ...
မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး ...
>>>Download and Watch Here (819Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 7:01:00 PM No comments:
Labels: 2011, Comedy, Drama, Romance, Taiwan
God of War: Zhao Yun Series (2016) - မြန်မာစာတန်းထ...
The Huntsman: Winter's War (2016) - မြန်မာစာတန်းထိ...
You are the Apple of My Eye (2011) - မြန်မာစာတန်းထ...